साम्राज्ञीको फेरी आयो अर्काे तस्बिर, प्रेमीसंग गाडीमै रोमान्स – ताजा समाचार
साम्राज्ञीको फेरी आयो अर्काे तस्बिर, प्रेमीसंग गाडीमै रोमान्स
काठमाडौं, ९ साउन । अभिनेत्री साम्राज्ञी शाहको फेरी अर्को तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । उनले प्रेमीसंग गाडीभित्र रोमान्स गरेको तस्विर सार्वजनिक भएको हो । फिल्मको सुटिगं सकेर इन्डोनेशियाको बालीमा आराम गर्न गएकी साम्राज्ञीका अन्तरंग तस्बिर बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही तस्बिर भने उनले निकै आलोचना भएपछि सामाजिक सञ्जालवाट हटाएकी छन् ।तर सार्वजनिक हुनासाथ भाइरल भइसकेका उनका तस्बिरले अहिले पनि चर्चा पाइरहेका छन् ।
एक पछि अर्को तस्बिर सार्वजनिक हुँदै जाने र त्यसले निकै चर्चा पाएपछि रिसाएकी साम्राज्ञीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिकृया पनि जनाएकी छन् । आफुलाई नकारात्मक कमेन्ट गर्नेहरुलाई उनले त्यस्ता कमेन्टले आफुलाई केही असर नगर्ने संकेत गर्दै प्रतिकृया दिएकी छन् ।
प्रेमीसंगको अन्तरंग तस्बिर बाहिरिएपछि आलोचित बनेकी साम्राज्ञीले त्यसको जवाफ स्वरुप प्रतिकृया दिएकी हुन् । उनले लेखेकी छन् हात्ति चले बजार, कुत्ता भुके हजार । नकारात्मक प्रतिकृया दिनेलाई साम्राज्ञीले कुकुरको संज्ञा दिँदै प्रतिकृया लेखिन् र अर्काविकिनी तस्विर सार्वजनिक गरिन् । अहिले भने फेरी उनको नयाँ तस्बिर बाहिरिएको छ । जसमा कारभित्रै प्रेमीसंग रोमान्स गरेको देख्न सकिन्छ ।
The ocean is everything that I want to be ?
A post shared by Samragyee Rajya Laxmi Shah (@srls_samragyeerlshah) on Jul 23, 2019 at 9:53pm PDT
A post shared by Samragyee Rajya Laxmi Shah (@srls_samragyeerlshah) on Jul 22, 2019 at 5:10am PDT
A post shared by Samragyee Rajya Laxmi Shah (@srls_samragyeerlshah) on Jul 22, 2019 at 5:06am PDT
A post shared by Samragyee Rajya Laxmi Shah (@srls_samragyeerlshah) on Jul 22, 2019 at 4:53am PDT
A post shared by Samragyee Rajya Laxmi Shah (@srls_samragyeerlshah) on Jul 21, 2019 at 2:59am PDT
उनै, साम्राज्ञी अहिले इन्डोनेशियाको बालीमा पुगेकी छिन् । बालीको एक विचमा पुगेकी साम्राज्ञी रातो विकिनीमा मस्ती मुडमा देखिएकी छिन् । समुन्द्रको पानीदेखि विचमा उनको मुड विन्दास देखिएको छ ।
नायिका शाहले रातो विकिनी लगाएर रमाइलो गर्दै गरेको तस्वीर इन्स्टाग्राममा पोष्ट गरेपछि यो तस्वीरले चर्चा पाइरहेको छ । साम्राज्ञी अभिनित दुई चलचित्र ‘मारुनी र रातो टिका निधारमा’ रिलिजको क्रममा छ ।
A post shared by Samragyee Rajya Laxmi Shah (@srls_samragyeerlshah) on Jul 17, 2019 at 11:49pm PDT
Let the waves hit my feet and the sand be my seat ?
Everything that I needed ?
छोरी भन्दा आमा तरुनी ! साम्राज्ञीकी आमा
गायक कुमार बस्नेतको गीत ‘छोरी भन्दा आमा तरुनी’ भन्ने गीतले एउटा दशक नै हल्लायो । त्यसबेलाको यो गीतको मर्म व्यंग्यात्मक तर सुन्दरतासँग सम्बन्ध राख्थ्यो । यसको मर्म अहिले पनि मरेको छैन ।
नेपाली रजतपटमा चलेकी सुन्दर अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहको सुन्दरताको उचाई एकातिर छ । उनको करिअरको रफ्तार अर्कातिर छ । तर, उनलाई जन्मदिने आमा कस्ति होलिन् ?
रेडकार्पेटमा सहभागी हुनेले त प्रत्यक्ष भेटेका हुन सक्छन् । किनभने छोरी साम्राज्ञीसँग हरेक कार्यक्रममा सहभागी हुन्छिन्, नेहा राज्यलक्ष्मी शाह । उनी पनि कम सुन्दर छैनन् । लागुपदार्थ र मद्यपान प्रयोगकर्ताको पुर्नस्थापनाका लागि कार्यरत नेहा निक्कै सुन्दर छिन् ।